“အမေများနေ့” မှာ သားသားမီးမီးတို့နဲ့အတူတူ အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အကြံပြုချက် (၄) ချက် - For her Myanmar
ယောင်းတို့ သားသားမီးမီးလေးတွေ မိခင်မေတ္တာကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက နားလည်လေးစားတတ်အောင် ဒီလိုအမှတ်တရလေးတွေ ဖန်တီးကြည့်ပါလား !!
ယောင်းတို့ရေ … မေလ (၁၂) ရက်နေ့ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ကျေးဇူးရှင်မေမေတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ “အမေများနေ့”ပါ။ ဒီလိုနေ့ထူးနေ့မြတ်လေးမှာ ယောင်းရဲ့မေမေကို အချိန်ပေးတဲ့အပြင် ယောင်းရဲ့သားသားမီးမီးတွေနဲ့လည်း အမှတ်တရတွေဖန်တီးပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းကြရင် မကောင်းဘူးလား ? ဘယ်လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကုန်ဆုံးရမလဲဆိုပြီး အကြံအိုက်နေရင်တော့ Stella ဝေမျှပေးမယ့် အကြံပြုချက်လေးတွေကနေ ရွေးချယ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
(၁) အမှတ်ရနေစေမယ့် တစ်နေရာရာကို လျှောက်လည်ပါ။
နေရာကောင်းတစ်ခုခု သတ်မှတ်ပြီး သားသားမီးမီးနဲ့ တူတူလျှောက်လည်ကြည့်ပါ ။ အဲ့နေရာနဲ့ ပက်သက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လို ပြောပြပါ။ ဒါဆိုရင် ယောင်းရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ အပျင်းလည်းပြေ၊ ဗဟုသုတလည်းရပေါ့။ ဒီအချက်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် နေရာလေးတစ်ခုကလည်း ယောင်းတို့အတွက် အဆင်သင့်ပါပဲ။ ဒါကတော့ ရန်ကုန်ဝန်ကြီးများရုံး The Secretariat က ပြုလုပ်မယ့် “အမေများနေ့” အတွက် အထူးအစီအစဉ်ပါ။
ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ မေမေနဲ့သားသားမီးမီးတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပြီး ဝန်ကြီးများရုံးအဆောက်အဦးရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ရှင်းလင်းပြောပြပေးမှာပါ ယောင်းတို့ရေ။ သားသားမီးမီးလေးတွေ အတွက်သာမက ယောင်းတို့အတွက်ပါ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သမိုင်းဗဟုသုတတွေ ရမှာနော်.. ဒီအစီအစဉ်လေးကို သဘောကျလို့ The Secretariat ကို မေမေနဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ တူတူသွားမယ်ဆိုရင် ကလေးဝင်ကြေးအခမဲ့နဲ့ မေမေတွေက ၅၀% လျှော့ဈေးရဦးမှာတဲ့နော်…အသေးစိတ်အကြောင်းအရာကို Asia Tours Myanmar Page မှာ ကြည့်နိုင်ပြီး ကြိုတင်ဘိုကင်တင်ထားဖို့တော့ လိုတာမို့ ဒီ form လေးဖြည့်ပြီး လျှော့ဈေးတွေရယူလိုက်ပါဦး ယောင်းရေ..
Related Article >>> ဘယ်အချိန်တွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ အပြည့်အဝအနားယူသင့်လဲ? ဘာကြောင့်လဲ?
(၂) သားသားမီးမီးတွေကို အချိန်ပေးပါ။
တခြားရက်တွေ မအားလို့ တူတူမဆော့ပေးနိုင်ရင်တောင် ဒီတစ်ရက်တော့ ညနေပိုင်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် အပြင်ထွက်ပြီး သူနဲ့တူတူဆော့ပေးလိုက်ပါ။ သားသားမီးမီးတွေကလည်း မေမေနဲ့အပြင်ထွက်ရတာကို အတိုင်းမသိပျော်နေမှာပါနော်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း အိမ်မှာပဲ ကွတ်ကီးလေးတွေ၊ cupcake လေးတွေလုပ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ပြီး အချိန်ကုန်ဆုံးပေးပါ။ လွယ်လွယ်ကူကူစားစရာလေးတွေကို သားသားမီးမီးနဲ့တူတူ လုပ်စားတာက ယောင်းတို့ကြားက နှောင်ကြိုးလေးကို ပိုမြဲမြံစေနိုင်ပါတယ်။
အမှတ်တမဲ့လေးတွေကနေ အမှတ်တရဖြစ်လာနိုင်တာမို့ တစ်နေ့တာ လျှပ်တစ်ပြက်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ တစ်နေ့ကျလို့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ပြန်ထုတ်ကြည့်မိတဲ့အခါ အဲ့ဒီနေ့လေးအကြောင်းကို သတိတရပြန်ပြောဖြစ်အောင်ပေါ့။
“မေမေ့ဗိုက်ထဲမှာ သားသား(သို့)မီးမီးရှိနေတုန်းက” လို့အစချီပြီး သူ့ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်း စသိတဲ့အချိန်ကစပြီး အခုအရွယ်အထိ ယောင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ အမှတ်တရဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးတွေကို သူ့ကိုပြန်ပြောပြပေးပါ။ ဒါလေးတွေက သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိ စိတ်ထဲစွဲထင်နေပြီး ယောင်းကို အချစ်တိုးစေမှာနော်။
ကဲ … ဒါဆို ဒီအကြံပေးချက်လေးတွေကို သုံးပြီး “အမေများနေ့”မှာ ချစ်ရတဲ့ သားသားမီးမီးနဲ့အတူ အမှတ်တရလေးတွေ ဖန်တီးပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ ယောင်းရေ …
ယောငျးတို့ သားသားမီးမီးလေးတှေ မိခငျမတ်ေတာကို ငယျငယျလေးကတညျးက နားလညျလေးစားတတျအောငျ ဒီလိုအမှတျတရလေးတှေ ဖနျတီးကွညျ့ပါလား !!
ယောငျးတို့ရေ … မလေ (၁၂) ရကျနဟေ့ာ တဈကမ်ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ကြေးဇူးရှငျမမေတှေကေို ဂုဏျပွုတဲ့ “အမမြေားနေ့”ပါ။ ဒီလိုနထေူ့းနမွေ့တျလေးမှာ ယောငျးရဲ့မမေကေို အခြိနျပေးတဲ့အပွငျ ယောငျးရဲ့သားသားမီးမီးတှနေဲ့လညျး အမှတျတရတှဖေနျတီးပွီး ပြျောပြျောရှငျရှငျဖွတျသနျးကွရငျ မကောငျးဘူးလား ? ဘယျလိုပြျောပြျောရှငျရှငျ ကုနျဆုံးရမလဲဆိုပွီး အကွံအိုကျနရေငျတော့ Stella ဝမြှေပေးမယျ့ အကွံပွုခကျြလေးတှကေနေ ရှေးခယျြကွညျ့လိုကျပါနျော။
(၁) အမှတျရနစေမေယျ့ တဈနရောရာကို လြှောကျလညျပါ။
နရောကောငျးတဈခုခု သတျမှတျပွီး သားသားမီးမီးနဲ့ တူတူလြှောကျလညျကွညျ့ပါ ။ အဲ့နရောနဲ့ ပကျသကျတဲ့သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပုံပွငျတဈပုဒျလို ပွောပွပါ။ ဒါဆိုရငျ ယောငျးရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတှေ အပငျြးလညျးပွေ၊ ဗဟုသုတလညျးရပေါ့။ ဒီအခကျြနဲ့ ကိုကျညီမယျ့ နရောလေးတဈခုကလညျး ယောငျးတို့အတှကျ အဆငျသငျ့ပါပဲ။ ဒါကတော့ ရနျကုနျဝနျကွီးမြားရုံး The Secretariat က ပွုလုပျမယျ့ “အမမြေားနေ့” အတှကျ အထူးအစီအစဉျပါ။
ဒီအစီအစဉျမှာတော့ မမေနေဲ့သားသားမီးမီးတှကေို ဓာတျပုံရိုကျပေးပွီး ဝနျကွီးမြားရုံးအဆောကျအဦးရဲ့ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ရှငျးလငျးပွောပွပေးမှာပါ ယောငျးတို့ရေ။ သားသားမီးမီးလေးတှေ အတှကျသာမက ယောငျးတို့အတှကျပါ အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ သမိုငျးဗဟုသုတတှေ ရမှာနျော.. ဒီအစီအစဉျလေးကို သဘောကလြို့ The Secretariat ကို မမေနေဲ့ သားသားမီးမီးလေးတှေ တူတူသှားမယျဆိုရငျ ကလေးဝငျကွေးအခမဲ့နဲ့ မမေတှေကေ ၅၀% လြှော့ဈေးရဦးမှာတဲ့နျော… ကွိုတငျဘိုကငျတငျထားဖို့တော့ လိုတာမို့ ဒီ form လေးဖွညျ့ပွီး လြှော့ဈေးတှရေယူလိုကျပါဦး ယောငျးရေ..
Related Article >>> ဘယျအခြိနျတှမှော လကေ့ငျြ့ခနျးမလုပျဘဲ အပွညျ့အဝအနားယူသငျ့လဲ? ဘာကွောငျ့လဲ?
(၂) သားသားမီးမီးတှကေို အခြိနျပေးပါ။
တခွားရကျတှေ မအားလို့ တူတူမဆော့ပေးနိုငျရငျတောငျ ဒီတဈရကျတော့ ညနပေိုငျးလောကျဖွဈဖွဈ အပွငျထှကျပွီး သူနဲ့တူတူဆော့ပေးလိုကျပါ။ သားသားမီးမီးတှကေလညျး မမေနေဲ့အပွငျထှကျရတာကို အတိုငျးမသိပြျောနမှောပါနျော။ ဒါမှမဟုတျလညျး အိမျမှာပဲ ကှတျကီးလေးတှေ၊ cupcake လေးတှလေုပျစားတာပဲဖွဈဖွဈ ပွုလုပျပွီး အခြိနျကုနျဆုံးပေးပါ။ လှယျလှယျကူကူစားစရာလေးတှကေို သားသားမီးမီးနဲ့တူတူ လုပျစားတာက ယောငျးတို့ကွားက နှောငျကွိုးလေးကို ပိုမွဲမွံစနေိုငျပါတယျ။
အမှတျတမဲ့လေးတှကေနေ အမှတျတရဖွဈလာနိုငျတာမို့ တဈနတေ့ာ လြှပျတဈပွကျလှုပျရှားမှုလေးတှကေို ဓာတျပုံရိုကျပွီး မှတျတမျးတငျထားပါ။ တဈနကေ့လြို့ ဓာတျပုံလေးတှေ ပွနျထုတျကွညျ့မိတဲ့အခါ အဲ့ဒီနလေ့ေးအကွောငျးကို သတိတရပွနျပွောဖွဈအောငျပေါ့။
“မမေဗေို့ကျထဲမှာ သားသား(သို့)မီးမီးရှိနတေုနျးက” လို့အစခြီပွီး သူ့ကိုယျဝနျရှိနကွေောငျး စသိတဲ့အခြိနျကစပွီး အခုအရှယျအထိ ယောငျးရဲ့စိတျထဲမှာ အမှတျတရဖွဈနတေဲ့အခြိနျလေးတှကေို သူ့ကိုပွနျပွောပွပေးပါ။ ဒါလေးတှကေ သူအရှယျရောကျလာတဲ့အထိ စိတျထဲစှဲထငျနပွေီး ယောငျးကို အခဈြတိုးစမှောနျော။
ကဲ … ဒါဆို ဒီအကွံပေးခကျြလေးတှကေို သုံးပွီး “အမမြေားနေ့”မှာ ခဈြရတဲ့ သားသားမီးမီးနဲ့အတူ အမှတျတရလေးတှေ ဖနျတီးပွီး ပြျောပြျောရှငျရှငျဖွတျသနျးနိုငျပါစေ ယောငျးရေ …
Tags: children, Event, high spot, mother, Mother's day, Photo, secretariat, Visit